Internet hijery dia iray amin’ireo tranainy Web fizarana
Ny filana vaovao Mampiaraka an-tserasera dia nanomboka mitombo
Ny fangatahana dia fantatra amin’ny anarana, miteraka ny famatsiana — nanomboka niseho ny Mampiaraka toerana. Ny voalohany dia ny Amerikana tetikasa, izay niorina efa tamin’ny, any Frantsa, ny voalohany ny Mampiaraka toerana dia ny fanompoana ny»Firaisana ara-nofo Niaraka»nanomboka tamin’ny taona. Raha vao nazava fa ny ampahany ny Fiarahana amin’ny aterineto no tsy afa-malaza, fa tena mahasoa ny asa izay manome izany fanompoana izany, dia nanomboka nitombo ny mitsambikina sy ny fetra. Ny ankehitriny mpampiasa Aterineto izay te-hihaona, ary manana fifandraisana amin’ny alalan’ny Aterineto, ny safidy dia ho aseho mihoatra ny am-polony Mampiaraka asa. Ambony ny top malaza indrindra Mampiaraka toerana Aterineto dikan-ny Internet Explorer no hanampy Anao tsy ho very ao izany rehetra izany motley vala sy hamantarana ny zavatra ny Mampiaraka asa dia misy dikany hanokana ny fotoana sarobidy.
Ny ampy ny Mampiaraka toerana ho laharana eo nidina ny filaminana sy ny tena fepetra ny fandrefesana ny isam-bolana no nanatrika ny harena ny miteny rosiana mpihaino.
Antontan’isa nindramina avy amin’ny orinasa fanta-daza web mpandalina ny fanontaniana ny votoatin’ny pejy dia tsy ilaina
Ny Mpamaky azy dia mazava ny antony mahatonga ny fototry ny note azo fanatrehana: izany no tsara indrindra amantarana ny fitakiana sy ny laza ny Internet loharano. Arakaraka ny fitsidihana amin’ny Mampiaraka toerana, ny kokoa ny mpampiasa, ary noho izany, ny ambony ny fanampoizana mba hihaona, ary manana fifandraisana.
Araka ny hitanao izao, ny ampy ny Mampiaraka toerana toy ny niova rehetra. Na dia ny voalohany toerana nitoetra ho ny goavana ity akany, eo amin’ny hafa- andalana efa lehibe»shuffling»: ny ambony nivoaka ny tranonkala ny»Firaisana ara-nofo Niaraka», sy ny aterineto»any Azia Mampiaraka»efa nahavita very mpampiasa, ary nanidina avy ny Top.
Fa misy vaovao mpandray anjara ny ampy toerana Fiarahana:»Fiarahana»ankehitriny eo amin’ny faha toerana. Mena nanao ny vaovao farany momba ny mpandray anjara»Ambony», hoy ny vaovao momba ny»newbie», ka manasa anao izahay ankehitriny mba hianatra indrindra amin’izao fotoana izao ny vaovao
Mahita dikan-finday →